သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 11 1930 Zile Beaver လိုင်း - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeအထွေထွေသမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 11 1930 Zile Beaver လိုင်း
11 / 08 / 2019 Levent Elmastaş အထွေထွေ, တူရကီ, ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက် 0
သြဂုတ်လ 11 1930 Zile Kunduz မီးရထားလမ်း (61 ကီလိုမီတာ) ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Müteaahit Nuri Demirağဖြစ်ခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ 11 1934 Yolçatı Elazig (24 ကီလိုမီတာ) လိုင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆွီဒင် - ဒိန်းမတ် Grba ။ သူကပြု၏။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ 11 1930 Zile-line ကို Beaver (61 ကီလိုမီတာ) ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် ... 11 / 08 / 2017 ယနေ့ Kunduz သမိုင်း (11 ကီလိုမီတာ) အတွက်သြဂုတ်လ 1930 61 Zile-line ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Müteaahit Nuri Demirağဖြစ်ခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ 11 1934 Yolçatı-Elazig (24 ကီလိုမီတာ) လိုင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆွီဒင်-ဒိန်းမတ် Grba ။ သူကပြု၏။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ 31 1932 Beaver-Kahn ရထားလမ်းစစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ 31 / 08 / 2015 ယနေ့တွင် 31 1892 Alpu-Sariköyလိုင်းသြဂုတ်လရက်စွဲများခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ 31 1932 Beaver-Kahn ရထားလမ်းသြဂုတ်လအတွင်းစစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 31 1932 Beaver-Kahn ရထားလမ်း ... 31 / 08 / 2016 ယနေ့တွင် 31 1892 Alpu-Sariköyလိုင်းသြဂုတ်လရက်စွဲများခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ 31 1932 Beaver-Kahn ရထားလမ်းသြဂုတ်လအတွင်းစစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ 31 2016 Keçiörenမြေအောက်ရထား၏ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ် drive ကိုသြဂုတ်လအတွင်းကျင်းပခဲ့သည်
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ 30 1930 လိုင်းတူရကီ-Sivas နှင့် Sivas ဘူတာဖွင့်လှစ် 30 / 08 / 2012 သြဂုတ်လ 30 1930 Sivas, တူရကီ-Sivas လိုင်းနှင့်ဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 602 ကီလိုမီတာ။ ထိုအခါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပင် 36 41.200.000 ပေါင်သုံးစွဲလျက်ရှိသည်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲမှာစကားပြောသောဝန်ကြီးချုပ် Ismet Pasha; "အချိန်မရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်းတူရကီ-Erzurum ရထားလမ်းဥရောပ Sakarya ရိုက်ထည့်ဖို့မေးခွန်းထုတ်စရာပါလိမ့်မယ် အကယ်. " ဟု၎င်းကပြောသည်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ 30 1930 Sivas, တူရကီ-Sivas လိုင်းနှင့်ဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 30 / 08 / 2015 ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်သြဂုတ်လ 30 1930 Sivas, တူရကီ-Sivas လိုင်းနှင့်ဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 602 ကီလိုမီတာ။ ထိုအခါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပင် 36 41.200.000 ပေါင်သုံးစွဲလျက်ရှိသည်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲမှာစကားပြောသောဝန်ကြီးချုပ် Ismet Pasha; "အချိန်မရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်းတူရကီ-Erzurum ရထားလမ်းဥရောပ Sakarya ရိုက်ထည့်ဖို့မေးခွန်းထုတ်စရာပါလိမ့်မယ် အကယ်. " ဟု၎င်းကပြောသည်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 30 1930 တူရကီ-Sivas လိုင်း ... 30 / 08 / 2016 ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်သြဂုတ်လ 30 1930 Sivas, တူရကီ-Sivas လိုင်းနှင့်ဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 602 ကီလိုမီတာ။ ထိုအခါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပင် 36 41.200.000 ပေါင်သုံးစွဲလျက်ရှိသည်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲမှာစကားပြောသောဝန်ကြီးချုပ် Ismet Pasha; "အချိန်မရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်းတူရကီ-Erzurum ရထားလမ်းဥရောပ Sakarya ရိုက်ထည့်ဖို့မေးခွန်းထုတ်စရာပါလိမ့်မယ် အကယ်. " ဟု၎င်းကပြောသည်။ https://youtu.be/phixnumxycorxnumxa မှ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 30 1930 တူရကီ-Sivas လိုင်း ... 30 / 08 / 2017 ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်သြဂုတ်လ 30 1930 Sivas, တူရကီ-Sivas လိုင်းနှင့်ဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 602 ကီလိုမီတာ။ ထိုအခါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပင် 36 41.200.000 ပေါင်သုံးစွဲလျက်ရှိသည်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲမှာစကားပြောသောဝန်ကြီးချုပ် Ismet Pasha; "အချိန်မရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်းတူရကီ-Erzurum ရထားလမ်းဥရောပ Sakarya ရိုက်ထည့်ဖို့မေးခွန်းထုတ်စရာပါလိမ့်မယ် အကယ်. " ဟု၎င်းကပြောသည်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 30 1930 တူရကီ-Sivas လိုင်း 30 / 08 / 2018 ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်သြဂုတ်လ 30 1930 Sivas, တူရကီ-Sivas လိုင်းနှင့်ဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 602 ကီလိုမီတာ။ ထိုအခါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပင် 36 41.200.000 ပေါင်သုံးစွဲလျက်ရှိသည်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲမှာစကားပြောသောဝန်ကြီးချုပ် Ismet Pasha; "အချိန်မရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်းတူရကီ-Erzurum ရထားလမ်းဥရောပ Sakarya ရိုက်ထည့်ဖို့မေးခွန်းထုတ်စရာပါလိမ့်မယ် အကယ်. " ဟု၎င်းကပြောသည်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အမိန့်-Balıköyဖွင့်လှစ်လိုင်း၏မတ်လ 11 1930 ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ 11 / 03 / 2012 မတ်လ 11 1930-Balıköyဖွင့်လှစ်လိုင်း၏အမိန့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဒီဇင်ဘာလ 1 1930 Fevzipaşa-လိုင်း Diyarbakir နှင့် Malatya ထဲသို့ဝင်ပထမဦးဆုံးမီးရထားရောက်ရှိပါပြီ 01 / 12 / 2012 ယနေ့တွင် 1 သမိုင်းအတွက်Kütahya-Tavsanli လိုင်း (1928 ကီလိုမီတာ) နာဖီးဒုတိယဝန်ကြီး Recep Peker တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားအတွက်ပြန်တမ်းခဲ့သည်aralıkxnumx။ ဒီဇင်ဘာလ 50 1 Fevzipaşa-လိုင်း Diyarbakir နှင့် Malatya ထဲသို့ဝင်ပထမဦးဆုံးမီးရထားရောက်ရှိပါပြီ။ တူရကီကနေဒီဇင်ဘာလ 1930 1 နှငျ့ "Hilts အစီရင်ခံစာ" အဖြစ်လူသိများအမေရိကန်ဖက်ဒရယ်အဝေးပြေးအုပ်ချုပ်ရေးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမူဝါဒအပြောင်းအလဲများအတွက်နျဆာပခဲ့သည်။ II ကို။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်စစ်ရေးအတွက်ရထားလမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌မလုံလောက်လမ်းသို့တူရကီတွန်း။
Zile Beaver လိုင်း
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ 11 1930 Zile-line ကို Beaver (61 ကီလိုမီတာ) ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 31 1932 Beaver-Kahn ရထားလမ်း ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ 30 1930 လိုင်းတူရကီ-Sivas နှင့် Sivas ဘူတာဖွင့်လှစ်
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ 30 1930 Sivas, တူရကီ-Sivas လိုင်းနှင့်ဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 30 1930 တူရကီ-Sivas လိုင်း ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အမိန့်-Balıköyဖွင့်လှစ်လိုင်း၏မတ်လ 11 1930 ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဒီဇင်ဘာလ 1 1930 Fevzipaşa-လိုင်း Diyarbakir နှင့် Malatya ထဲသို့ဝင်ပထမဦးဆုံးမီးရထားရောက်ရှိပါပြီ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (371) ဇူလိုင်လ 2019 (637) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (494) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)